ဇွန်လ 2014 - စာမျက်နှာ2- အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2014 » ဇွန်လ (စာမျက်နှာ 2)
InfoComm Las Vegas မှ 2014 မှာ TURBOSOUND FLASHLINE
ယခုနှစ်ပြပွဲမှလုပ်မပေးနိုင်သူကိုသငျသညျမြားအဘို့, ဒီဗီဒီယိုကိုသငျသညျသစ်ကို TURBOSOUND FLASHLINE အသံချဲ့စက်မှာပထမဦးဆုံးအကြည့်ကိုငါပေးမည်။ လူတိုင်းအတွက် ...
အနီရောင် TX အဆိုပါ Remote မှတ်တမ်းတင်ကွန်ယက်ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ထုတ်လွှင့်အသံအထူးကုနီ TX ဥရောပထိပ်တန်းတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ပဏာမအဝေးမှမှတ်တမ်းတင်ကွန်ယက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောအခြေခံပေါ်မှာဂီတနှင့်ထုတ်လွှင့်တာဝန်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာမှပံ့ပိုးနေတုန်း, RRN ဂီယာ, အသံဖမ်း, ရောစပ်, Master, ပုံတူများနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက်ဖြည့်တင်းကြောင်း bespoke ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားမှတ်တမ်းတင်ကွန်ယက် GmbH သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဒတ်ခ်ျမိုဘိုင်းနှင့်အတူတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းခဲ့ ...
Dracast LED ကို Update ကို post ကို NAB 2014
Drabast နှင့်မသက်ဆိုင်သော Convergent Design မှရရှိသောကွန်ဗင်းရှင်းသို့အခမဲ့ ၀ င်ခွင့်လက်မှတ် မှလွဲ၍ NAB ကွန်ဗင်းရှင်းကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ IMG_7184 IMG_7185 IMG_7186 IMG_7187 ...
WDEF သတင်းများ 12 - အသံလွှင့်တီဗီအင်ဂျင်နီယာချုပ်
WDEF News 12 - အသံလွှင့်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာမှရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာက Broadcast Beat မဂ္ဂဇင်းမှတာဝန်ယူသည်
ထုတ်လုပ်သူများ DPP အသိအမှတ်ပြုကိရိယာအစုံအစီအစဉ်ကိုမှတ်ပုံတင်သည်
Broadcast Operation Controller – WTXL ABC 27
Broadcast Operation Controller wanted at WTXL ABC 27. Duties include monitors of transmitters/tower lights under the FCC regulations and report issues to the engineering department. Take/document various transmitter readings.
FCC Proposes $12,000 Fine Against WWCS-A For To…
2 ၏စာမျက်နှာ 23«12345	»	1020...နောက်ဆုံး»